Category:CS1 maint: Multiple names: authors list - Wikipedia
Kani waa qaybta raadraaca
Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso oo lagu ilaaliyo liisaska bogagga— ee ugu horreyaan liisaska dartood iyo ku isticmaalidooda qodobka iyo dayactirka qaybta. kama mid ahan qaybinta insaykolobeediyaha.
Qaybtaan wee ka qarsantahay boggaga xubinta ka ah—ilaa doorbidista adeegsadaha u dhigma la dhigo.
Qaybahaan waxaa loo isticmaalaa si loogu raad raaco, loo dhiso oo loo habeeyo liisaska bogagga u baahan "feejignaan en masse" (tusaale ahaan, bogagga adeegsanaya syntaks dhacsan), ama waxaa loo baahanaan karaa in oo qof saxo sida ugu dhakhsiyaha badan.
Qeybahaani waxay sidoo kale u adeegaan isku darka xubnaha liisas dhowr ah ama qayb-hoosaadyo aad u weyn, uguna waxtar badan (ku takooray kala-soocidda).
Help:CS1 errors Template:Large category TOC 2
Bogagga ku jira qeybta "CS1 maint: Multiple names: authors list"
waxaa meeshaan ku jira 34 oo maqaallo ah waxeena ku jiraan qeybtaan, waana 34 gud ahaan.
Liska ee xiddigaha dhow
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:CS1_maint:_Multiple_names:_authors_list&oldid=168586"
Last edited on 20 May 2017, at 09:00
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 May 2017, marka ee eheed 09:00.